ရာဖင်ညာ ရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ ၊ အသင်း ၄ သင်းရဲ့ ပတ်လည်ဇာတ်လမ်း ၊ လီဝန် ကို ကမ်းလှမ်းတော့မယ့် ဘာဆာ တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းများ - xyznews.co
ရာဖင်ညာ ရဲ့ နောက်ဆုံးအခြေအနေ ၊ အသင်း ၄ သင်းရဲ့ ပတ်လည်ဇာတ်လမ်း ၊ လီဝန် ကို ကမ်းလှမ်းတော့မယ့် ဘာဆာ တို့နဲ့ . . . နောက်ဆုံးရ အပြောင်းအရွှေ့ သတင်းများ
နယ်သာလန် ကလပ် အိုင်ယက်စ် နဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် အသင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ မန်ယူနိုက်တက် ၊ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ရဲ့ အကြားမှာ အပြန်အလှန် ကမ်းလှမ်းမှုတွေ ၊ ကြားဖြတ်မှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဟာ အာဆင်နယ် က ပစ်မှတ် ထားနေတဲ့ နောက်ခံလူ လီဆန်ဒရို မာတီနက် ကို ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ်ဖို့ စီစဉ် ထားတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး ကလည်း စတီဗင် ဘာ့ဂျ်ဝိုင်း ကို အိုင်ယက်စ် ထံ စေလွှတ်ပြီး ယူနိုက်တက် တို့ ခေါ်ယူဖို့ ချိန်ရွယ် နေတဲ့ တောင်ပံ ကစားသမား အန်တိုနီ ကို အလဲအလှယ် အဖြစ် ခေါ်ယူဖို့ ဆွေးနွေး ပြောဆိုနေပြီလို့ သိရပါတယ် ။
အိုင်ယက်စ် ကတော့ ယူနိုက်တက် ကို ပြောင်းဖို့ အလားအလာ မရှိတော့တဲ့ နောက်ခံလူ တင်းဘား ကို စာချုပ်သစ် ကမ်းလှမ်းဖို့ လုပ်ဆောင်နေပြီ လို့ သိရပါတယ် ။
ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေဟာ လာမယ့် ရာသီမှာ ပထမပိုင်း အပြီး အင်တာဗျူး မေးမြန်းခြင်း မပြုလုပ်ဖို့ ဝိုင်းဝန်း မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
စပိန် က လာတဲ့ သတင်းတွေ အရ ဘာစီလိုနာ ဟာ နွေရာသီ တလျောက်လုံး သူတို့နဲ့ သတင်းထွက်နေတဲ့ ဘိုင်ယန်မြုးနစ် တိုက်စစ်မှူးကြီး ရောဘတ် လီဝန်ဒေါ့စကီး ကို ယူရို သန်း ၅၀ နဲ့ ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ် တော့မယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် အသင်း ဥက္ကဌ မာရိုတာ ဟာ အီတလီ အခြေစိုက် သတင်းဌာနတွေနဲ့ အင်တာဗျူး ပြုလုပ်သွား ခဲ့ပြီး မေးခွန်းများစွာ ကို ဖြေကြားသွားခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ့ဒိအထဲမှာ ပါဝင်တာတွေကတော့ –
လူကာကူ နဲ့ ဒိုင်ဘားလား ကို ခေါ်ဖို့ ကြိုးစားနေပြီး ဘဏ္ဍာရေး အခြေအနေပေါ် မူတည်မည် ။
လူကာကူ ကို ခေါ်နိုင်ဖို့ သေချာပေမယ့် ဒီရက်ပိုင်းမှာ ကြေညာနိုင်ဖို့ မရှိသေး ၊
မစ်ခီတာရမ် နဲ့ အိုနာနာ တို့ ၂ ယောက်ကတော့ အလွတ်နဲ့ ခေါ်ယူထားပြီးဖြစ် ၊
နောက်ခံလူ စကရီနီယာ အနေနဲ့ အသင်းကနေ ထွက်ခွာနိုင်တဲ့ အလားအလာရှိ ၊ အင်တာ ဘက်ကလည်း အမြန်ဆုံး အစားထိုးနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ထား ၊ နောက်ခံလူရှာရတာဟာ တိုက်စစ်မှူး ရှာရတာထက် ပိုလွယ်ကူကြောင်းပြောဆို ၊
လူတာရို မာတီနက် ဟာ အသင်းရဲ့ အဓိက ကစားသမား ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်အသင်းကိုမှ ရောင်းချမှာ မဟုတ် ဆိုတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အင်တာမီလန် ဟာ ကာဂလီယာလီ မှာ ကစားနေတဲ့ အေစီမီလန် နောက်ခံလူဟောင်း ဘယ်လာနိုဗာ ကို ယူရို ၄ သန်း နဲ့ အငှား ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရယူ နိုင်ခဲ့ပြီလို့လည်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကတော့ လူငယ် ဂိုးသမားလေး ဒင်း ဟန်ဒါဆင် ကို နော်တင်ဟမ် ဖောရက်စ် အသင်းထံ အငှား စေလွှတ်ဖို့ အတွက် စာရွက် စာတမ်း ကိစ္စတွေ ပြုလုပ်နေပြီး ဒီအပတ်ထဲမှာ အပြီးသတ်ဖို့ ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အန်ဟဲ ဒီမာရီယာ ကလည်း ဒီအပတ် ထဲမှာ ယူဗင်တပ် ကို အဖြေပြန်ပေးဖို့ ရှိနေပြီး ၁ နှစ် စာချုပ်နဲ့ တူရင်ကလပ် ဆီ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ သေချာသလောက် နီးစပ်နေပြီလို့ သိရပါတယ် ။
မန်စီးတီး ကို မပြောင်းရွှေ့ခင်မှာ ဟူလီယန် အယ်လ်ဗာရက်ဇ် ကို ပရီးမီးယားလိဂ် အပါအဝင် ဥရောပ တလွှားက ကလပ် အသင်း ၅ သင်းခန့်က ချိတ်ဆက်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြ ပေမယ့် ကစားသမားကတော့ အဂွေရို ရဲ့ ခြေရာကို လိုက်နင်းဖို့ အတွက် စီးတီးကိုသာ ရွေးချယ် ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
မန်စီးတီး နည်းပြကြီး ပက် ဂွာဒီယိုလာ ဟာ ယူကရိန်း နောက်ခံလူ ဇင်ချန်ကို ကို ရောင်းထုတ်ဖြစ်ခဲ့ ပါက အာဆင်နယ် ရဲ့ စကော့တလန် နောက်ခံလူ တိုင်ယာနီ ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူဖို့ စိတ်ကူး ရှိနေတယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဂွာဒီယိုလာ ဟာ ကွင်းလယ်လူ ဘာနာဒို ဆေးလ်ဗား ကို အသင်းမှာ ဆက်ရှိစေလို ပေမယ့် အသင်းမှာ မပျော်တဲ့ ဘယ်ကစားသမားကိုမှ ဆက်ထိန်းထားဖို့ စိတ်ကူး မရှိဘူးလို့လည်း ကြားသိရပါတယ် ။
လာဇီယို ကွင်းလယ်လူ လူးဝစ် ဖိလစ်ပီ ဟာ လာလီဂါ ကလပ် ရီးရဲ ဘက်တစ် ထံ အလွတ်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ဖို့ နီးကပ် နေပြီလို့ စပိန် သတင်းစာ မာကာ က ဖော်ပြ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ လိုက်ပ်ဇစ် က မိုရီဘာ ကို အိုင်ယက်စ် အသင်းထံ အခု နွေရာသီ အတွင်း ရောင်းထုတ် ခဲ့ပါက ပြောင်းရွှေ့ကြေး ရဲ့ ၁၀% ကို ရရှိမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ ရာဖင်ညာ နဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု ရယူနိုင်ခဲ့ ပေမယ့် လိဒ်ယူနိုက်တက် နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ညှိနှိုင်းမှု အဆင်မပြေခဲ့ဘူးလို့ နာမည်ကျော် ဂျာနယ်လစ် ဖာဘရီဇီယို ရိုမာနို က ထုတ်ဖော် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ကတော့ လိဒ် အသင်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းမှု ပြုလုပ်နေပြီး ချဲလ်ဆီး နဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး တို့ကလည်း ဆက်သွယ် ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ရာဖင်ညာ ရဲ့ ပြောင်းရွှေ့ကြေး ကတော့ ယူရို ၆၅ ကနေ ၇၅ သန်း အကြားမှာ ရှိနိုင်တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဘန်လေ နည်းပြသစ် ကွန်ပနီ ဟာ အသင်းကို ပရီးမီးယားလိဂ်ဆီ တန်းပြန်တက် နိုင်ဖို့ စိတ်တိုင်းကျ ပြင်ဆင် သွားမှာ ဖြစ်ပြီး ကစားသမား အများအပြားကို ရှင်းထုတ်ဖို့ အစီအစဉ် ရေးဆွဲနေတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
ရီးရဲ မက်ဒရစ် ဝါရင့် ကစားသမားကြီး တိုနီ ကရူးစ် ဟာ အသင်းနဲ့ စာချုပ်သစ် မချုပ်ဆို သေးဘဲ စာချုပ်သက်တမ်း နောက်ဆုံးနှစ် ဖြစ်တဲ့ အခု ရာသီအတွင်းမှသာ ရှေ့ဆက်မယ့် အလားအလာကို ကြည့်ပြီး စာချုပ်သစ် ချုပ်ဆိုဖို့ စဉ်းစား ထားတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
အဲဗာတန် အသင်းဟာ ယူဗင်တပ် နောက်ခံလူ လူကာ ပါလီဂရီနီ ကို ကမ်းလှမ်းမှု ပြုလုပ် ထားတယ်လို့ Corriere dello Sport သတင်းစာက ဖော်ပြ သွားခဲ့ပြီး ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ ဖူလ်ဟမ် တို့ကလည်း ၂၃ နှစ် အရွယ် ဘယ်နောက်ခံလူကို စိတ်ဝင်စားနေ ကြတယ်လို့ သိရပါတယ် ။
လက်စတာ စီးတီး ကတော့ အဓိက ကွင်းလယ်လူ ဂျိမ်းစ် မက်ဒီဆင် ကို စာချုပ်သစ် ကမ်းလှမ်းထားပြီး ပြောဆို ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
Previous Article ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ ရုန်းကန်ခဲ့ရတဲ့ ပေါ့ဂ်ဘာ နဲ့ လူကာကူ တို့ စီးရီးအေ ပြိုင်ပွဲဆီကို ပြောင်းမယ်ဆိုတာက ဘယ်လို ကောင်းကျိုးတွေ ဖြစ်စေမလဲ #ဒယ်လ်ပီယာရို
Next Article ဘာဆာ ကို ငြင်းခဲ့တဲ့ ရူဒီဂါ ၊ ဇီဒန်း နည်းပြချင်တဲ့ အသင်း ၊ နှုတ်ထွက်လိုက်တဲ့ ရိုင်ယန်ဂစ် တို့နဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ